विवाहको सेरोफेरोमा यौनस्वास्थ्य - यौन मनोविज्ञान - साप्ताहिक
यसपटक मंसिर र फागुनमा विवाहका लगन प्रशस्तै छन् । त्यसो त नेपालमा पनि लभ म्यारिजको चलन बढ्दो क्रममा छ । नेपालमा गरिएको एक सर्वेक्षण अनुसार करिब ६२ प्रतिशत युवक तथा २७ प्रतिशत युवतीले डेटिङ्का बेला यौनजन्य गतिविधि गर्ने गरेका छन् भने ४० प्रतिशत युवक तथा ९ प्रतिशत युवतीले डेटिङ्का बेला यौनसम्पर्क राख्ने तथ्यबाट पछिल्लो पुस्ता यौनका मामिलामा उदार बन्दै गएको देखिन्छ । यद्यपि धेरैजसो नेपाली किशोरीले अझै पनि विवाह पछि मात्र यौनसम्पर्क राख्ने तर लगत्तै गर्भधारण गरेको पाइन्छ । नेपाली किशोरहरूले भने विवाहको एक वर्षअघि नै यौनसम्पर्कको अनुभव लिएको पाइएको छ ।
नेपाली समाजमा विवाहलाई यौनसम्बन्ध स्थापना गर्ने कानुनी वा सामाजिक मान्यताका रूपमा समेत लिइन्छ । मागी विवाहमा त भैहाल्यो, प्रेम विवाहमै पनि पहिले यौनसम्पर्क स्थापित भैसकेको छैन भने विवाहको पहिलो रात नवदम्पतीका लागि निकै कौतूहलतापूर्ण हुन्छ । त्यसमाथि विवाहको पहिलो रातलाई लिएर र्‍याक गर्नेहरूको पनि कमी हुँदैन । विशेषत: हिन्दी चलचित्रको देखासिकीमा विवाहको पहिलो रातलाई सुहागरात भन्नमै सजिलो मानिन्छ र त्यसपछिको केही समयावधिलाई हनिमुन भनिन्छ ।
अपरिपक्व उमेर, अपर्याप्त चिनाजानी एवं यौन शिक्षाको अभावमा विवाहको पहिलो रात मात्र नभै त्यसपछिको यौन जीवन पनि अन्यौलपूर्ण तथा तनावपूर्ण हुन्छ ।
खासमा विवाहपछिको पहिलो रात र हनिमुन भन्नेबित्तिकै यौनसँग सम्बद्ध कुरा मात्र सोचिन्छ, जुन गलत हो । एकातिर विवाहको रमझमबीच गोप्यता, एकान्त वातावरणको अभाव अनि अर्कातिर गर्भ रहला कि भन्ने चिन्ताले पनि सुरुका केहि रात त्रासमय हुन बेर लाग्दैन । पाकक्रीडा, सफल यौन प्रतिक्रिया चक्र, चरम सुख, अनिच्छित गर्भ, आकस्मिक गर्भनिरोध, सुरक्षित यौन सम्पर्क, मासिक चक्र तथा गर्भपतनको कानुनी प्रावधानसम्बन्धी यथेष्ट जानकारीको अभावमा नवदम्पतीले भरपुर यौन आनन्द उठाउन सक्दैनन् ।
विवाहपछि सामाजिक तथा कानुनी तवरमा यौनसम्पर्क राख्न छुट हुन्छ, अरू बेला यस्तो किसिमको स्वतन्त्रता हुँदैन ।
पहिलो पटक कायम गरिएको यौनसम्पर्कमा पुरुषको लिंग उत्तेजना नहुने, शीघ्र स्खलन हुने समस्या सिर्जना हुनसक्छ भने महिला यौन साथीमा गर्भ रहला कि भन्ने डरले पूर्ण रुपमा यौन सन्तुष्टि प्राप्त गर्न गाह्रो हुन्छ । यस्तो परिस्थितिमा पहिलो यौनसम्पर्कका क्रममा हाइमेन (योनिच्छद) च्यातिई हल्का रक्तश्राव वा रगत मिसिएको योनिश्रावले थप त्रास
उचित यौन शिक्षा एवं प्रजनन् अंगको विस्तृत जानकारीको अभावमा पहिलो पटकको यौनसम्पर्क धेरैजसोका लागि त्यति सफल र सुखदायी हुँदैन । डर, त्रास, हतार, हतासा एवं गोप्यता तथा असुरक्षित वातावरणमा यौनसम्पर्क राख्नुपर्दा यौनसम्पर्क पूर्वको तयारीमा खासै ध्यान जाँदैन, तर सफल यौनसुखका लागि सम्भोगको सही व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ ।
सम्भोग कि मैथुन ?
खासमा विवाहपछि विशेषत: महिलाले आफूमाथि वैवाहिक बलात्कार भएको अनुभव गर्छन् । विवाहपछि दम्पतीले नै सम्भोगको आनन्द लिन पाएको अनुभूति गर्नुपर्छ विशेषत: महिलाहरूले ।
मैथुन र सम्भोगबीच तात्विक भिन्नता छ । मैथुन केवल शारीरिक प्रक्रिया हो र यसमा पुरुष पार्टनरले मात्र यौनआनन्द प्राप्त गर्छ भने सफल सम्भोगमा यौनेच्छा तथा यौन क्रियाकलापका बारेमा आपसमा खुलेर कुरा गर्ने वातावरण हुन्छ । मैथुनमा मानसिक रूपले यौन कार्यमा तयार नभएपनि केवल भौतिक सुख प्राप्त गर्ने अभिप्राय हुन्छ । जबकि सम्भोगमा दुवैबीच हेराइबाट सुरुवात भै यौनजन्य वार्तालाप, संवेदनशीलताको स्पर्श हुँदै अन्त्यमा सम्भोगसम्म पुगिन्छ । सम्भोगमा सही अर्थमा यौन सुख प्राप्त हुन्छ ।
योनि–लिंग मिलन अन्तिम गन्तव्य भए पनि सम्भोगअघि आपसी छेडखानी, चिमोट्ने कार्य तथा आसन परिवर्तनले सम्भोगलाई सही अर्थ दिन्छ ।
सम्भोगमा अन्य यौन आकर्षण केन्द्र, विभिन्न आसन अनि पाकक्रीडा, चरमसुखलाई पनि उत्तिकै महत्व दिइन्छ र पहिलो रातमै यौन सम्बन्ध राख्नैपर्छ, महिला पार्टनरको हाइमेन नामक योनि ढाक्ने झिल्ली च्यातिनै पर्छ, हल्का पीडा सँगै रगत बग्नै पर्छ भन्ने गलत धारणाले पहिलो रात मात्र नभै त्यसपछिका रात एवं दाम्पत्य जीवन सुमधुर नहुन सक्छ । त्यसैले सुहागरातलाई यौन सम्बन्धको अन्तिम अवसर नमानी यौनजीवनको प्रारम्भ बिन्दु मानेर पार्टनरको सहमतीमा मात्र यौन सम्बन्ध राख्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।
सफल यौन कार्यका लागि आसनको आफ्नै महत्व छ । त्यसैले पनि कामसूत्रमा यसको विशेष चर्चा गरिएको छ । कतिपय परिस्थिति, शारीरिक स्थिति तथा यौन स्वास्थ्यको दृष्टिले थरिथरिका यौन आसन अपनाउनुपर्ने हुन्छ । यौनसम्बन्धी ज्ञान, चलनचल्ती, फुर्सद, महिनावारी चक्र तथा पार्टनरको मुडअनुसार यौन आसनहरू फरक–फरक हुनसक्छन् ।
दम्पती वा पार्टनरबीचको आपसी सहयोगले मात्र दुवै जनाले अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्छन् । सफल यौन केवल यौनाङ्गको मिलन होइन । पुरुष लिंगलाई योनिसम्पर्कअघि शारीरिक तथा मानसिक रूपमा तयार पार्न तथा उत्तेजनामा ल्याउन आवश्यक छ । पुरुषको दाँजोमा महिलालाई चरम सन्तुष्टिमा पुग्न लामो समय लाग्छ । महिलाले एउटै चक्रमा पनि पटक–पटक चरमसुख प्राप्त गर्न सक्छन्, तर पुरुषहरूमा वीर्य स्खलनसँगै लिंगमा शिथिलता आई पुन: उत्तेजनामा आउन समय लाग्छ । महिला र पुरुष बीचको उत्तेजना एवं चरमसुखको फरकपनका कारण पाकक्रीडाको छुट्टै महत्व छ ।
पाकक्रीडाका क्रममा दम्पतीले लिंगबाहेक शरीरका अन्य अंग पनि यौनका दृष्टिले संवेदनशील छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ । संवेदनशील यौनांग स्पर्शले मात्र होइन, दम्पतीबीच ख्याल ठट्टा गर्ने, हँसिमजाक गर्ने, ख्याल ठट्टा गर्ने बानीले पनि यसमा सहयोग पुर्‍याउँछ । पाकक्रीडाका क्रममा एक अर्कालाई सुम्सुम्याउने देखि चुम्बन गर्ने, अँगालो मार्ने, हल्का चिमोट्ने, टोक्ने, दबाउने, काउकुती लगाउने आदि कार्य गर्न सकिन्छ । मधुरो प्रकाश, हल्का परफ्युम, सुमधुर संगीत एवं थोरै मद्यपानले थप मादकता प्रदान गर्छ ।
चरम सुख अर्थात् अर्गाज्म
पुरुष र महिलाको चरम सुखमा केही भिन्नता हुन्छ । पुरुषमा चरम सुखको अत्याधिक उचाइमा वीर्य थैली, पुरुष ग्रन्थी एवं शुक्रकीटवाहिनी नलीमा संकुचन उत्पन्न भै वीर्य स्खलन हुन्छ । चरमसुख प्राप्त भएसँगै पुरुषमा शिथिलता आउँछ । महिलाहरूमा चरम सुख प्राप्त गर्ने क्रममा विभिन्न चरण अनुसार यौनाङ्गमा विभिन्न परिवर्तन आउँछ । मुख्यतया योनिद्वार, भगांकुरमा रक्त प्रवाह बढ्नुका साथै स्तन, अनुहार, छाला तथा कानको लोतीमा रातोपन देखिने, मुटुको चाल बढ्ने, श्वास प्रश्वास तीव्र हुने आदि हुन्छ । यौन उत्तेजनाको निरन्तरतासँगै चरमसुख प्राप्त हुने क्रममा स्त्री जननेन्द्रियका मांसपेशी पटक पटक खुम्चिने, फुक्ने हुन्छ ।
यौन उत्तेजना, प्लेटो चरण, चरम सुख तथा रिजोलुसनको चरण गरी चरमसुख प्राप्तिका क्रममा यौनचक्रका विभिन्न चारवटा चरणबाट गुज्रनुपर्छ । महिला पुरुष दुवैमा यौनक्रियाका क्रममा चरम सुख प्राप्तिपछि दुवै जनाको जननेन्द्रिय तथा शरीरमा आएको परिवर्तन बिस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्कन्छ । हस्तमैथुनका बेलामा पनि कमै मात्रामा भए पनि यस्ता परिवर्तन देखिन्छन् । पुरुषहरू एकपटकको यौनक्रियाको चरम सुख प्राप्त गरेपछि तुरुन्तै यौनसम्पर्क राख्न असमर्थ हुन्छन्, किनभने उनीहरू पूर्णत: आरामको स्थितिमा जान्छन् । कतिपय महिला भने यौन उत्तेजना कायम रहेको खण्डमा पटक–पटक चरम सुख प्राप्त गर्न सक्छन् ।
विवाह लगत्तै विवाहित जोडीहरू हनिमुन (मधुमास) मा लिप्त हुन्छन् । मागी विवाह गरेकाहरूले उक्त अवधिमा एक–अर्कालाई राम्रोसँग बुझ्ने अवसर प्राप्त गर्छन्, जसले दाम्पत्य जीवनलाई नै चीरस्थायी बनाउँछ । यस क्रममा सुरक्षित यौनसम्पर्कका उपायहरू जानी राख्नु राम्रो हुन्छ । नवजोडी विशेषत: लोग्नेमान्छेले उत्ताउलो हुनु हुँदैन भने यौनसम्पर्क राख्न हतारिनुभन्दा पाक्क्रीडामा जोड दिनु उपयुक्त हुन्छ । त्यसैले एकै पटक यौनकार्यमा लाग्नुभन्दा त्यसअघि गर्न सकिने कतिपय यौनिक कार्यहरूका सम्बन्धमा जानकारी राख्नुपर्छ ।
युवावस्थामा साइकल चढ्ने, बाइक चढ्ने, घोडा चढ्ने वा सिक्ने क्रममा योनिद्वारमा हुने झिल्ली (हाइमेन) सजिलै च्यातिन सक्छ । त्यसैले कौमार्य भङ्ग भए नभएको विषय लाई लिएर नवदम्पती बीच मनमुटाव हुनु हुँदैन । त्यसो त विवाहपूर्व यौनसम्बन्ध स्थापित नै भए पनि त्यो सहजै थाहा पाइने विषय होइन ।
मधुमासका बेला कतिपय नवदम्पतीमा शिघ्र वीर्य स्खलन हुने, उत्तेजना नआउने, लिंग नउठ्ने, योनि सुख्खा हुने, यौनसम्पर्क पीडादायी (डिस्परेउनिया) हुने समस्या हुनसक्छ । विवाहपछि अर्थात् पटक–पटक यौनसम्पर्क राख्न थाले पछि पिसाबथैलीको संक्रमण (हनिमुन सिस्टाइटिस) हुने तथा सुरुको यौन कार्यपश्चात् हाइमेन च्यातिएर हल्का रक्तश्राव पनि हुनसक्छ ।
यौन चरमसुख मानिसले प्राप्त गर्न सक्ने सुख वा आनन्दहरूमध्ये उत्तम कोटीको सुख हो । आधुनिक युवती नै भए पनि आफू तृप्त भए–नभएको कुरा व्यक्त गर्न हिचकिचाउँछन् । यो कुरालाई नजर अन्दाज गरेको खण्डमा तथा हल्का तवरले लिए स्वास्नीमानिसमा बिस्तारै मानसिक समस्या अर्थात् डिप्रेसन (उदासीपन) देखा पर्न सक्छ । त्यसका साथै अन्य कारणले पनि यौन असन्तुष्टि पैदा हुनसक्छ ।
के हो यौन असन्तुष्टि ?
मानवीय यौनचक्रका विभिन्न चरणलाई ख्याल नराखी दम्पतीबीच वा यौनसाथीबीच आपसी समझदारी बिना पाकक्रीडाको अज्ञानता, लिंग घर्षणमा मात्र ध्यान दिएका कारण यौन असन्तुष्टि बढ्न सक्छ । कतिपयमा शीघ्र स्खलन, यौन उत्तेजनाको कमी, नि:सन्तान, लिंगको बनावटका कारण चरम सुख प्राप्त गर्न गाह्रो हुनुका साथै यौन जीवन पनि सफल हुँदैन । यसका साथै गोप्यताको कमी, एकान्त वातावरणको कमी, चिन्ता, तनाव, अनिच्छित गर्भ तथा यौनरोग लाग्ने आशंकाका कारणले पनि यौन सन्तुष्टि प्राप्त गर्न समस्या हुनसक्छ ।
विवाहइतर सम्बन्ध, अविवाहित अवस्थामै यौन सम्बन्धका कारण पनि यौन सन्तुष्टि प्राप्त गर्न गाह्रो हुनसक्छ । एकै खालको जीवनयापन, दाम्पतीबीच विश्वासको कमी, करकाप वा बाध्यतापछिको यौनसम्बन्ध, वैवाहिक बलात्कार, यौनहिंसा आदि कारणले पनि चरम सुख प्राप्त गर्न गाह्रो हुन्छ । कतिपय व्यक्ति सानै उमेरमा यौन हिंसा वा यौनजन्य अपराधबाट प्रताडित भैसकेको भए पछि यौन सम्बन्ध नै राख्न नचाहने कारण यथेष्ट यौन सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्दैनन् । जीर्ण खालको स्वास्थ्य समस्याका साथै यौन उत्तेजनामा खलल पुग्ने खालको शारीरिक चोटका कारण यौन सन्तुष्टि प्राप्त गर्न समस्या हुनसक्छ । महिलाहरूले महिनावारीका क्रममा अत्याधिक रक्तश्राव हुँदा, योनिमार्ग सुख्खापनको समस्या, योनि संकुचन एवं पीडादायी यौनसम्पर्कका कारण पनि चरम सुख प्राप्त गर्न सक्दैनन् ।